प्रेमिकालाई डीएनए टेस्टिंग किट उपहार दिएपछि खुल्यो ३० वर्ष पुराना रहस्य ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
प्रेमिकालाई डीएनए टेस्टिंग किट उपहार दिएपछि खुल्यो ३० वर्ष पुराना रहस्य !
प्राय मानिसले खुसीको अवसरमा उपहार दिने गर्छन् । उपहार समान्यतया मानिसलाई सम्झनाको लागि दिने गरिन्छ तर कहिले काँही त्यही उपहारले पनि मानिसको जिवनलाई आमुल परिर्वतन ल्याउने गर्छ ।
उपहार हामीले कसैलाई खुशी बनाउनको लागि दिने गर्छौ । तर तर एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई उपहार दिँदा परिवारमा खल्लिबल्ली मच्चिएको छ । उपहारले युवतीको जिन्दगी नै परिवर्तन भएको छ ।
वास्तवमा प्रेमीले क्रिसमसको अवसरमा आफ्नी पार्टनरको लागि डीएनए टेस्टिंग किट खरिद गरेका थिए, तर यस किटले उनकी प्रेमिकाको पुरै जिन्दगी नै बदलिएको छ । उनको परिवारको ३० वर्ष परानो रहस्य उपहारले खोलिदिएको छ ।
युवकको अनुसार प्रेमिकालाई दिएको उपहार टेस्ट किट रहेको थाहा पाएपछि आफ्नै परिवारको एक सदस्यको नाम पनि समावेश भएपछि कथाले अर्कै मोड लिएको थियो ।
किटमा समावेश भएको नाम प्रेमिकाको आफ्नै आमा र सौतेलो बहिनी थिइन् । तर, युवतीले यस बारेमा आमालाई सोध्दा सौतेलो बहिनीको बारेमा सबै अस्विकार गरिन् । त्यसपछि जान स्थिम नाम नै तोकेर व्यक्तिको बारेमा आमालाई सोध्दा सबैको होश उडेको थियो ।
वास्तवमा युवतीको सौतेलो बहिनीको पिताको नाम जान स्मिथ थियो । केही दिन अगाडी मात्र आमा पुर्व प्रेमीलाई भेट्न गएकी थिइन् । त्यसपछि उनी गर्भवती भएकी थिइन् । उनलाई थाहा थियो हुर्कदै गरेको बच्चाको पिता जान हुन् भनेर, तर कसैलाई भनिनन् । आफ्नो सौतेली छोरीको बारेमा सबै लुकाएर राखेकी थिइन् । आमाको यस्तो कुरा छोरीले सुनेपछि होश उडेको थियो ।एजेन्सी
प्रकाशित मिति: Sep 16, 2021
थाहापाउनुहोस् : यस्तो गाउँ जहाँ मापसे गर्नेलाई रातभर थुनिन्छ पिँजडामा !
भारत देश एक धार्मिक तथा सांस्कृति विभिधता भएको देश हो । यहाँ थुपै जातजाति बसोबास
श्रीमतीलाई कोब्राले टोकाएर हत्या गरेपछि…!
भारतमा आफ्नी श्रीमतीको सर्पले टोकाएर हत्या गर्ने एक भारतीयमाथि अदालतले दोहोरो आजीवन कारावासको सजाय तोकेको
लकडाउनमा सँगै बस्न दिक्क लागेर महिलाले पतिलाई बिक्रिमा राखेपछि…!
कोरोना भाइरसले पछिल्लो समयमा विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न धेरै राष्ट्रहरुले लकडाउन
जापानी राजकुमारीले प्रेमीसँग विवाह गर्नका लागि शाही हैसियत त्याग्दै !
साचो प्रेम गर्ने मानिसले जस्तो सुकै अवस्थाको पनि सामना गर्न सक्छन् । साथै प्रेमी जोडीले
बालिकाको आँखाबाट दैनिक ढुंगाको आँशु झरेपछि…!
संसारमा हामीले कतिपय कल्पना नगरेको घटना घटीरहेका हुन्छन् कि जुन हामीले पत्याउन पनि गाह्रो हुने
६ महिने बालकले वाटर स्किइङ गरेर बनाए विश्व कीर्तिमान !
पछिल्लो समयमा अमेरिकाको एक ६ महिनाका बालकले वाटर स्किइङ गरेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको